Ngeshwa, akuzona zonke kowesifazane okhulelwe uba ezifiselekayo. Kaningi kuyenzeka ukuthi umama okhulelwe ulahla usana ngemuva nje ufunde mayelana nokukhulelwa. Kulokhu, odokotela isisu. Yenza zokukhwabanisa ngezindlela eziningana. Lesi sihloko sigxile kakhulu indlela yokwenza lokho miniabort eside. Uzobona imininingwane le nqubo. Futhi Kuhle kokusho, eye miniabort izinsuku, amanani nemibandela.
Indlela sokuqeda ukukhulelwa?
Zikhona izindlela eziningi ukuze ayibulale ebamba isisu engadingeki zenzeka. Omunye wabo miniabort. Izinsuku, amanani kanye nezinqubo kuchazwe lapha ngezansi. Kuye inani Emasontweni onke okukhulelwa ongakuphazamisa ukuthuthukiswa umbungu kanye nokususa evamile futhi lokuzalwa yokufakelwa. Nokho, inqubo yokugcina kuyashaqisa kakhulu futhi kungaholela yezinkinga kobukhulu obuhlukahlukene.
Miniabort, sokukhulelwa lapho kungenzeka ubuncane medicated noma cleaner. Konke kuncike izici ngazinye umzimba female, futhi izikhungo zezempilo.
Indlela cleaner iyona ukukhathala we umgodi lesizalo nge ingxenye endometrium esibelethweni. Inqubo engenziwa ngaphansi izinzwa jikelele noma wendawo. Kulokhu, lo wesifazane uthunyelwa ekhaya ngokushesha ngemva zokukhwabanisa. Okukhishwayo kuphela amacala lapho kukhona nanoma yiziphi izinkinga.
Izidakamizwa uphazamisa umsebenzi ukuphila fetus Kwenziwa esebenzisa izidakamizwa ezikhethekile. Lezi kungaba ejenti equkethe mifepristone. Futhi, ngezinye izikhathi odokotela zisebenzisa oxytocin noma zokuvimbela inzalo abavamile lolukhulunywako Isikali ezithile.
On lokho elithi musa miniabort?
Mhlawumbe lo mbuzo enikezwa yilowo nalowo owesifazane osuke efuna ukuphelisa ukukhulelwa. Phela, zokukhwabanisa enjalo ukuze kuncishiswe ingozi yokuthola esikhathini esizayo. Kuye indlela isetshenziselwa kwezisu imikhawulo emasontweni angathunyelwa ezahlukene. Ake sizame ukuqonda ngokuningiliziwe nalokho okwashiwo eside kungenziwa miniabort.
Miniabort namagama afana zimi kanje. Umshini nenshisekelo ukukhiqiza kufika ezinyangeni ezimbili yokukhulelwa. Ukuze yini ukunemba kakhudlwana, kuze kube seqophelweni lokuba usayizi sac sokukhulelwa begodu i-embryo kumelwe ilingane esingamasonto ayisishiyagalombili. Kulokhu, kusukela ngosuku lokuqala lokugcina esikhathini.
miniabort okunjalo imigomo eqine kungenxa yokuthi kakade ngesonto wesishiyagalolunye sokukhulelwa iqala ukuthuthukiswa esebenzayo umbungu. Futhi wabeka ekuqaleni yi-placenta. Kule nkathi isivele nzima ukuhlanza kwesibeletho esebenzisa idivayisi cleaner.
Nokususa noma ukuhlanza
Le nqubo kungabuye ashiwo esigabeni mini-izisu. Zonke ngenxa yokuthi ngesikhathi zokukhwabanisa cishe ekwandiseni umsele wesibeletho. miniabort ezinjalo isikhathi kanje.
Imithetho luthole ukuthi amasonto kuze kufinyelele 12 yentuthuko owesifazane wengane ungakwazi ngokuzithandela sokuqeda ukukhulelwa. Kulokhu, ngemva kwamasonto ambalwa ukubambezeleka kukhethwe inqubo curettage. Ngakho, isikhathi salokhu zokukhwabanisa - izinyanga 3 kusukela ngosuku zokugcina esikhathini.
ekunqanyulweni kwengane yezokwelapha zokuphila
Kuze ngasiphi isikhathi miniabort lolu hlobo? Odokotela baye ubeke umkhawulo we amasonto emihlanu kuya kwayisithupha. Kulesi usuku umjikelezo, okwakwenza zokukhwabanisa kumele ingabi ngaphezu kuka 42.
Lapho isisu wezokwelapha wobulili bubuhle ngokuphuza imithi ethile ngaphansi kweso lwezokwelapha. Uma udinga afeze Inqubo ebizwa ngokuthi i "miniabort yezokwelapha" imigomo, amaphilisi, futhi amanani uzobe kuchazwe ngudokotela wakho. Ukuze uqale, onguchwepheshe kufanele kube ukuqinisekisa ukuthi isikhathi sakho sokukhulelwa ingeqi imikhawulo kuvunyelwe. Kuphela emva kwalolo suku kuyakhethwa bese ukulungiselela zokukhwabanisa.
Alternative izindlela sokuqeda ukukhulelwa
Ukwakhela phezu kwasiphi eside ongayenza miniabort? Uma ukhetha ukusebenzisa izidakamizwa ukwandisa contractility we myometrium (isib, "Oxytocin"), khona-ke wenze zokukhwabanisa enjalo akufanele kamuva kweviki elilodwa ukubambezeleka.
Kwakuphakathi nale nkathi, ukuncipha iqanda eselivundisiwe usengozini kakhulu. It is hhayi lokho ngokuphepha unamathisele odongeni lesizalo. Uma ngalesi sikhathi faka umthamo eshiwo zomuthi udokotela engase yenzeke kulowo mcimbi kwesisu nokuguqulwa. Nokho, odokotela ngokuthi inqubo mini-isisu.
Ukukhipha izisu ngokushesha ngemva kokubamba
Kukhona olunye uhlobo zokukhwabanisa eholela isisu. It kungabuye ngokuthi uhlobo mini-isisu. Ukuze le nqubo, sebenzisa umkhiqizo onengxenye ethile umthamo omkhulu hormone.
Ngakho, owesifazane ngemuva ngocansi, okuyinto kungenzeka kuholele ekuhlaleni kwesisu, ukuphuza umthamo iqoqo izidakamizwa. Ngemva kwalokho waqala ukopha, okungase kubhekwe ekuqaleni umjikelezo entsha. Kuyaphawuleka ukuthi zokukhwabanisa enjalo kuyingozi ngempela. Uma ungatholi sokuqeda ukukhulelwa, futhi kuyaqhubeka, umntwana angazalwa ogulayo.
Ngakho, manje ukuthi yini eye miniabort isikhathi. manipulation amanani kuzoncika onjani inqubo, udokotela isebenzisa. Uma isicelo ezindaweni zokusiza ngezempilo zomphakathi, ngaphezu kwakho konke, manipulation kuyoba khulula. Nokho, ukuze lokhu okudingayo ukuze uthole isikhathi esiqondile imingcele osungulwe futhi babe ipasipoti umshwalense inqubomgomo.
Mini-isisu engenziwa eklinikhi yangasese. Kulokhu, manipulation izindleko zizoba kanje:
cleaner nenshisekelo - kusukela 3000 kuya ruble 7000;
nokususa noma yokuhlanza - kusukela 2000 kuya ruble 5000;
wezokwelapha isisu izidakamizwa mifepristone okuqukethwe - kusuka 4,000 ruble 10,000;
isisu wezokwelapha nokusetshenziswa "Oxytocin" nezidakamizwa hormone isinyathelo ngokushesha - kusukela 1000 kuya ruble 3000.
Emva inqubo kumele alandele imithetho ethile. Ngemva kwamasonto amabili inqubo kuyadingeka ukuze ubone ultrasound ukuhlola. Medic ngeke ucwaningo bese ukuhlola isimo umthondo. Njengoba inqubo kwenziwa "abayizimpumputhe", ie ematfuba ukuthi izinhlayiya zizohlala esibelethweni kule ingaphakathi lesizalo. Izinkinga zenzeka kuyaqabukela, kodwa imithi eyaziwa Ezimweni ezinjalo.
Futhi, ngemva kokuhlinzwa, kumelwe ukuqapha ngokucophelela impilo yabo. Ukwabiwa akufanele uqhubeke isikhathi eside. Ngokuvamile bagcina emavikini amabili. Ngalesi sikhathi owesifazane kufanele uphuze imithi ethile okuye ebekwe udokotela. Lokhu kungase kube indlela ukwandisa contractility lesizalo, izidakamizwa elwa namagciwane, i-hormone izidakamizwa, njalonjalo.
Ukulandela ukukhipha izisu is hhayi Kunconywa ukuba ukuhlela kwesisu kulezi zinyanga eziyisithupha ezizayo. Umtimba udzinga isikhathi sokwakha kabusha kanye nokulungisa. Ngakho-ke ukucabangela kuwufanele sobulili zisebenzisa inzalo.
Manje usuyazi ukuthi hlobo luni mini-isisu. Ukuze zokukhwabanisa ngamunye usethe isikhathi ehlukile. Kufanele ngokuqinile ukuba alalele imikhawulo. Kungenjalo kungaba khona izinkinga, futhi eziyingozi. Ungalokothi uzame sokuqeda ukukhulelwa bebodwa, besebenzisa izindlela yendabuko futhi izindlela kwabafazi ubudala. Konke lokhu kungaholela imiphumela engahlosiwe. Uma kudingeka, ubheke art. Kuphela udokotela wezifo zabesifazane Ungakhetha indlela efanele ngawe kwezisu, ephephile kakhulu impilo. Umuthi futhi ube nempilo!
"Hamamelis" - amakhandlela hemorrhoids wamafutha: yokusetshenziswa, analogs